Andrey Arshavin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta Wargelinta
Home ASIAN FOOTBALL STORIES Andrey Arshavin Storyhood Story Sheekooyin Xaqiiqo Wadani ah
Andrey Arshavin Storyhood Story Sheekooyin Xaqiiqo Wadani ah
Cusboonaysiinta ugu dambeysay December 18, 2017
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubada cagta ee ugu caansan ee loo yaqaan Nickname; 'Shava'. Dabeecadda Caruurta Andrey Arshavin iyo Akhbaaraha Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Kaga bilow.
Andrey Arshavin Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weedho-Xaqiiqo-Nolosha Hore
Andrey Sergeyevich Arshavin oo ku dhashay 29 May 1981 ee Saint Petersburg by Sergey Arshavin (aabaha) iyo Tatiana Arshavina (hooyo).
Waxa uu ka badbaaday shil uu ku dili lahaa markii uu gaadhay gaari cunug ahaan. Waalidiintiisii ​​wuu furay markii uu ahaa 12, waxa uu ahaa wakhti uu u baahnaa labadoodaba. Inaad uur yeelato hooyadeed waxay leedahay natiijo u gaar ah sida hooyadiisi liidato. Andrey wuxuu lahaa inuu seexdo dabaqa qolka adag oo leh hooyadiis. Waxa uu lahaa riyadiisa ah inuu noqdo mid kubadda cagta ka ciyaara oo caruurnimo ah.
Nasiib wanaag, aabihiis ayaa xusuustay, waana inuu ku caawiyaa inuu sii wado riyadiisa. Waxa uu ahaa aabihiis oo ku qanciyay inuu ku guuleysto kubada cagta ka dib markii uu ku guuldareystay inuu noqdo ciyaaryahan kubada cagta ah.
Arshavin wuxuu bilaabay inuu kubada cagta ku bilaabo da'da yar iyo todobo sano jir. Aabihiis ayaa isaga diiwaangeliyay Akademiyada kubadda cagta ee Smena of Zenit, naadiga naadiga ah. Ashavin ayaa loo sameeyay inuu tixgeliyo akadeemiyada ahmiyad weyn ka dib markii uu fiiro gaar ah u yeeshay kubada cagta waqti gaaban. Sidaa darted, wuxuu ku biiray dugsi u dhow meel u dhow kubada cagta. Wuxuu loola jeedaa in uu akhriyo buugiisa oo uu kubad ciyaaro isla waqti isku mid ah.
Waqtigii uu ku soo barbaaray isaga oo u hoggaansamay ficilka ciyaarta, jaceylkiisa kubada cagta ayaa koray iyada oo waxbarashadiisu hoos u dhacday. Waqtiga qaar, isagu ma sii wadi karo diinta tacliinta. Dayacaad la'aanta maadooyinka tacliinta badanaa waxay keeneen dabeecado xun.
Sida laga soo xigtay Andrey "Waxaan si xun u dhaqmayay dugsiga. Markii aan ku jiray fasalka labaad, waxaan hoos u jebiyay joornaalka diiwaanka fasalka kaliya sababtoo ah ma rabo inaan dhigto fasallada. Waxay ahayd dhacdadan iga soo tuurtay. "
Waa inuu dib ugu laabto akadeemiga si uu ugu biiro saaxiibadiisa kubada cagta. Waxa uu ahaa ilmo yar iyo kabtana isaga dhexdiisa. Wax yar kadibna wuxuu noqday geesiga kubadda cagta ee gudaha.
Andrey Arshavin Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weedho-Xaqiiqo-Xirfadda Soo-koobista
Arshavin wuxuu kulankiisa ugu horeeyay u ciyaaray kubada cagta ee bishii August 2, 2000. Dhab ahaantii, waxay ku dhacday carrada Ingiriiska. 19 ayaa bedelay Andrey Kobelev intii lagu guda jiray Zenit's 3-0 ay kaga badisay Bradford City kulankii Intertoto Cup.
Ciyaaryahankan da'da yar ayaa sugayay sanad kale si uu u noqdo boos joogta ah kooxda ka dhisan St Petersburg. Dhammaantii, wuxuu ku qaatay sideed xilli oo Zenit ah, uu dhaliyey goolal 71 isla markaana u dhiibay 100 wuxuu ka caawiyaa 281 muuqaalkiisa tartamada Ruushka iyo caalamka. Wuxuu noqday geesiga taageerayaasha St Pete, kuwaas oo naaneeyay "Shava", iyo calaamad dhabta ah ee kooxda ka timi Waqooyiga Caasimadda.
Waxaa loo caleemo saaray ciyaaryahanka sannadka ee Russia ee 2006, laakiin waxa uu ahaa Arshavin labadii sanno ee la soo dhaafay kooxda - markii tababaraha reer Holland Dick Advocaat uu ku guuleystay abaalmarinta - taasoo aheyd midka ugu guulaha badan.
Tan iyo markii uu sanadii hore ku biiray FC Barcelona, ​​waligiisna ma diidan xaqiiqda ah inuu ku riyoodo inuu u ciyaaro kooxda reer Catalan. Waxay aheyd Arsenal oo wadatay qalbiga.
Andrey Arshavin Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weedho-Xaqiiqo-Nolosha Qoyska
Wuxuu ku dhashay qoys fasal shaqeeya oo caadi ah. Aabihiis Sergei Arshavin wuxuu u ciyaaray kubad sameeye. Tatiana Arshavina waa hooyada kubada cagta Ruushka Andrei Arshavina. Sergei Arshavin wuxuu ku dhintay qalalaasaha wadnaha ee 40.
Andrey Arshavin Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weedho-Xaqiiqo-Nolosha Xiriirka
Yulia Arshavina ayaa ku dhashay 3 Juun 1985 (da'da 32) Andrey Arshavin xaaskiisa kowaad. Waxay guursadeen 2004 waxayna is-furteen 2013. Arshavin waxay haysataa saddex carruur ah iyada oo leh - Arseniy Arshavin, Artem Arshavin iyo gabadhaada Yana Arshavina. Ka dib markii ay furiisteen, Ashavin wuu madhnaaday. Nasiib daro, in ka badan seddex sano, waxay ku dhow yihiin ma wada xiriiraan mana uusan arkin carruurtiisa. Yulia kama hor istaagin inuu sidaas sameeyo. Taa bedelkeeda, waxa ay aheyd Ashavin oo aan sameynin riixa. Wuxuu kaliya u diray lacago iyo hadiyado.
Waxaa la soo wariyay in 3 sano ka dib furiinka, Ashavin go'aansaday inuu mar kale guursado. Go'aankaasi wuxuu yimid kadib markii uu la midoobey carruurtiisii ​​oo ka soo jeeda xaaskiisii ​​hore. Waxa uu xirxiray xidhitaankii uu la joogi jiray Alice Catimini. Kuwa jecel waxay guursadeen September 1, 2016 ee Saint-Petersburg.
Munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay oo kaliya dadka ugu dhow, oo ay ka mid yihiin carruurta Alice oo markii ugu horreysay guursaday, xafladii martida martigelisay sidoo kale waxay lahayd aroos yar oo aroos ah oo go'aansaday in ay wax walba oo xasilan oo gurigooda ah ku sameeyaan. Waxaa sidoo kale la ogyahay in Alice ay beddeshay magaceeda, noqoshada Arshavina.
Andrey Arshavin Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weedho-Xaqiiqo-Naqshad Fashion ah
Arshavin waxay sidoo kale raacdey shahaadooyin iyo tababar ku habboon Fashion Design.
Andrey Arshavin Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weedho-Xaqiiqo-Siyaasiyiin
2007, wuxuu ka qaybqaatay doorashadii loo doortay musharaxa Golaha Sharci-samaynta ee St.Petersburg ee xisbiga Ruushka. Ciyaaryahanka kubadda cagta ayaa ku guuleystay doorashadii, lakiin waxa uu iska casilay xilkiisa.
Qaybtiisu waxay ku magacawday tuulo tayo leh "Arshavinka" ka dib ciyaaryahankii hore ee Arsenal. Tani waxay ka timid jacaylkii ay u qabeen isaga.
Andrey Arshavin Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weedho-Xaqiiqo-Qoraa
Andrey Arshavin waa qoraa, oo leh saddex buug oo uu ku qoran yahay resume: "Euro-2008. Guus iyo Kooxdiisa. Buugga taariikhda Andrey Arshavin "; "Waan qabanay! Sheekada Guusha Weyn "; iyo "Arshavin, oo ay ku jirto hal magaciisu yahay 555 Su'aalo iyo Jawaabo ku saabsan Haweenka, Lacagta, Siyaasadda iyo Kubadda Cagta.
Andrey Arshavin Sheeko-dheer-dheer Sheeko Xaqiiqo Weedho-Xaqiiqo-Charity
Wuxuu sidoo kale ku lug leeyahay shaqada samafalka. Arshavin wuxuu aqbalay dalabkii loo diray inuu noqdo Safiirka SOS ee Carruurta ee magaalada Pushkin ee u dhow St. Petersburg.
Arsenal Taariikhda Kubadda Cagta
Wareysiga Ciyaaraha Ruushka
Denis Cheryshev Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Aleksandr Kokorin Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Nemanja Matic Childhood Story Sheekooyin Xaqiiqooyin Wada-hadal ah
Park Ji Sung Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn
Taariikhda wax laga beddelay: Diseembar 28, 2018
Taariikhda wax laga badalay: July 2, 2020
Taariikhda la beddelay: Noofambar 25, 2019